အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး Saga နှင့် Facebook Negotiating
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး Saga App ကို
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး Saga cheat
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး Saga အကူအညီ, Tips and Cheats
ဒါကြောင့်ယခုအားဖြင့်သင်တို့ကိုလူတိုင်းမကဤဂိမ်း၏ပရိတ်သတ်ကြောင်းထွက်နေသေးတယ်ခဲ့ကြပေမည်, ကောင်းစွာသူတို့ရဲ့အရှုံး! ပြဿနာများစွာကို '' Anti-ဂိမ်းကစားဖြစ်ပါတယ်’ တစ်ဦးကောင်းအဟောင်း whinge ပျော်မွေ့သော်လည်းသင်ဘဝတွေကိုအဘို့သင့်အစာစားချင်စိတ်ထိန်းထားနိုင်တယ်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်နှင့်ပျော်ရွှင်စွာကျွေးမွေးလက်ပျော်ရွှင်စွာအသံတိတ်အဆိုပါအသင်းကူညီပေးနေ!
သင့်ရဲ့မဟာမိတ်များရှာမည်, အားလုံးသူချင်းဂိမ်းကစားအပေါ်သို့တောင်းဆို status ကိုထုတ်နေတဲ့ကြွေးကြော်သံထုတ်စေလွှတ်မည်, Facebook ပေါ်တွင်မဆိုဂိမ်းကစားသူမည်သူမဆိုတစ်ဦးကြီးမြတ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိသောချစ်ကြည်ရေး၏တန်ဖိုးကိုသိတယ်. ဒါကကိုယ့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးလည်းကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်, မည်သည့်အမာခံလယ်သမားသို့မဟုတ်သကြားလုံးနယ်ပြန်အနည်းငယ်ပြန်သင့်ကျောခြစ်ရာမှပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်!
သင်သည်သင်၏စစ်မှန်သောသူငယ်ချင်းများကိုအားလုံးတစ်စမတ်စာရင်းသူတို့ကို add ကြသူထွက်နေသေးတယ်ရှိသည်ဟုပြီးတာနဲ့. ထိုအခါသင်သည်တစုံတခုကိုအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး post အခါတိုင်းရုံသငျ့ပရိအဖြစ်ဒီ list ကို select ရန်သေချာစေပါ. သငျသညျယေဘုယျအားဖြင့်အများပြည်သူအကြားရွေးချယ်နိုင်ပါသည်, မိတ်ဆွေများက, ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများနှင့်သင်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့ကြပေမည်ဆိုစမတ်စာရင်း. သင့်ရဲ့ privacy settings တွေကိုအကျွမ်းတဝင် Get, ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထို့နောက်တိုင်းယခုသင့် settings ကို refresh မှမဆိုအန္တရာယ်ပြုမနိုင်!
app ကိုသင့်ကိုယ်စား post နိုင်သည့်ဖို့ပရိသတ်ကိုကန့်သတ်ရန်, ငါတို့ရှိသမျှသည် app တစ်ခုသွားကြောင်းရိုင်း၏ရလဒ်များကိုကိုမြင်ရပါတယ်, ပြီးပြည့်စုံသောကျပန်းမိတ်ဆွေများတောင်းဆိုမှုများထွက်ပေးပို့ခြင်းညာနဲ့အလယ်ဗဟို left. setting များကိုသို့ သွား. , ပြီးတော့ app ဆက်တင်သို့နှင့် '' သာငါ့ကို select လုပ်ပါ’ သင်တို့သည်ဤအမှုအရာသည်သင်၏ကိုယ်စား post ဘယ်လောက်မှာအံ့အားသင့်လိမ့်မယ်, တချို့လူတွေကအနည်းငယ် cranky ရအံ့ဩစရာမရှိ! သင်တစ်ဦး firecracker ဖန်တီးတိုင်းသိကြပါသို့မဟုတ်ဦးဆောင်သူအပေါ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးတို့ကိုရှောက်သွားသူတို့တကယ့်လိုအပ်ချက်…ရိုးသားစွာငါဂိမ်း (အများကြီး) နှင့် app များကိုပင်ငါ၏အသတင်းကိုအစာကျွေးခြင်းကနေပိတ်ဆို့ထားသည်.
သငျသညျဘယ်လောက်သင်ပို့စ်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက် copping လျှင် app များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းများစကားပြောသောကြောင့်ယခုပြီးတော့တိုင်းအနည်းငယ် status ကိုထွက်ထားရန်ပေးဆောင်စေခြင်းငှါ, ပဲသူတို့ကနည်းနည်း '' X ကိုထိမှန်နိုင်သည်ကိုလူတွေသတိပေးလည်းသိသိသာသာဘာမျှ’ လုံးဝ၎င်းတို့၏သတင်းကိုအစာကျွေးခြင်းကနေတားမြစ်ဖို့မဆိုပို့စ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်မှာ. facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့ scariest အရာကယ့်ကိုသူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်သောလူများ၏အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်!
သင်ရုံအကူအညီနဲ့များအတွက်အပူတပြင်းတောင်းပန်ခြင်းရတဲ့ကြသည်မဟုတ်သင်၏မိတ်ဆွေများအနေဖြင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်သင့်မိတ်ဆွေများအကူအညီလိုတဲ့တံတားပေါ်မှီဝဲနေတယ်ဆိုရင် (ယင်း၏တစ်ခုလုံးနာရီများကဲ့သို့ဖြစ်ရသောအခါသင်သိနှငျ့သငျသာအသုံး 'passes နှစ်ခုရှိ) သင်အမြဲ facebook ကိုရပ်ဆိုင်းခြင်း, ကိုယ်တိုင်တာဝန်များကိုဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ်. သင်တစ်ဦးစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိအခါဤအသိသာသာထိုကဲ့သို့ဖုန်းအဖြစ်အလုပ်ဖြစ်တယ်.
နောက်ဆုံးမရယ့်ကို facebook ကိုအစွန်အဖျားသျောလညျးသငျရှိနိုင်ပါသည်ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့5သင်ကစားပွဲပေါ်တင်ဆောင်ကြတစ်ခုချင်းစီကိုစက်ပေါ်ရှိဘဝတွေကို, ipad ဒါ, iPhone ကို, လက်ပ်တော့, ဒက်စ်တော့ (မိဘ / မိတ်ဖက်သို့မဟုတ်ကလေးကဖုန်းကို!)
Filed Under: Facebook က Tagged: Facebook က, မိတ်ဆွေများက, ဘဝတွေကို
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး Saga – အဲဒါကိုကြည့်ခြင်းထက်အများကြီးပိုပြီးပါဝင်ပတ်သက်မယ့်!
'' Boom ကိုသွားသောအရာ!’ ~ ပေကယ်ဆယ်ရေး Firecrackers
level 27 – အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး Saga
level 59 – အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး Saga
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး Saga – level 29
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး – level 43
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး Saga အကူအညီ
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး Saga အဆင့် 26 ကူညီပါ
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး Saga က Windows Phone
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး Saga ကို PC မှ Download
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး Saga Facebook မှာဂိမ်း